Akpụkpọ ya dị mma, anya na-enwu gbaa, olu siri ike… oh kedụ na m na-atụ uche ya. Chọpụta, mgbe ụfọdụ ọ ga-ebili nke ụtụtụ otú ahụ ka m kụrụ ya na a gbawara nke ikuku oyi… Mana mgbe ọ na-aga, ọ nọ na.
M mechara hapụ ya ka ọ laa. Ọ na-aga dọkịta. Enwere m olile anya na ha nwere ike ịwa ahụ n'ụzọ dị mfe ma weghachite ya n'aka m.